Kulligeen waan wada oggolaan karnaa in dhisidda jidhku ay tahay mid ka mid ah dhaqannada ugu da'da weyn ee loogu talagalay hagaajinta muuqaalka shakhsiyaadka, gaar ahaan ragga. In kasta oo qof waliba ku dhufto jimicsiga oo leh natiijo ka duwan tii la rabay, hooseeyaha guud waa in mid kastaa doonayo inuu u muuqdo mid ka fiican, gubtay dufano dheeraad ah oo ku dar muruqyo badan. Haweenka, dib u soo celinta muuqaalka dumarka ee soo jiidashada leh waa rajo muhiim ah ka dib dhisidda jirka. Si kastaba ha noqotee, si tan loo gaaro, waa inaad doorataa midda saxda ah a Isugeynta Anabolic Steroids (AAS) si loo fuliyo waxaad rabto.
Waxaan u abuurnay tusaha iibsadaha oo ay ka buuxaan talooyin iyo talooyinkeenna ugu sarreeya si ay kaaga caawiyaan inaad doorato kan ugu fiican Waxyaalaha cayriin ee Anabolic Steroids (AAS).
Iibinta kulul Steroids Raw Qalabka Inta badan Durid caan ah Steroids Raw Qalabka Waxyaabaha ugu fiican ee afka laga qaato ee loo yaqaan 'Oral Steroids Qalabka Cayriin'
Testosterone Enathate / Tijaabinta E
Sababta aan u soo xulnay:
Iibka steroids-ka ugu weyn ee wax laga iibsado ayaa nooga yimid sannadihii lasoo dhaafay
Dawooyinka istaraatiijiyadeed ee aasaasiga ah iyo kuwa lagu taliyo
Nooca ugu fudud uguna jaban steroids ka alaabta ceeriin
The steroids steroids-ka ugu wadaagga iyo soo dhoweynta ee suuqa.
Xarunta ugu caansan ee Tren ka mid ah ciyaaraha fudud
Trenbolone Acetate ayaa ka xoog badan Trenbolone Enanthate sababtoo ah Enanthate ester waxay qaadataa tiro badan xarunta.
Isticmaalayaasha badankood marka ugu horreysa ee ay la socdaan hormoonka Trenbolone marwalba waa Trenbolone Acetate.
Macaamiisha ayaa doorbida inay si xoog leh u isticmaalaan isticmaalka afka
Dianabol waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan dhismaha weyn.
Saamaynta Dianabol way fududahay in la qabsado mar la isticmaalo waa la joojiyaa marka la barbar dhigo steroids.
Qiimee Qiime Details More Qiimee Qiime Details More Qiimee Qiime Details More
Waa kuwan Kuwa Ugu Waaweeyn ee Loogu Talo Galay Dawooyinka Anabolic Steroids Raw:
Magacyada steroidka Anabolic steroid ee ugu caansan
Xulashooyinka steroid ee ugu caansan waa:
Budada Dianabol (methandrostenolone)
Deca Durabolin (budada nandrolone decanoate)
Budada Winstrol (stanozolol)
Qalabka loo yaqaan 'Equipoisematerial' (braenone undecanoate raw)
Magacyada steroid Anabolic ee ugu waxtarka badan
Qiyaasta isticmaalaha, steroidsyada ugu waxtarka badan ayaa ah:
Budada Trenbolone (guuleystaha cad)
Hormoonka Koritaanka Aadanaha (HGHraw)
Fahamka Noocyada kala duwan ee Daawooyinka loo yaqaan 'Anabolic Steroids'
Waxaa jira dhowr tilmaamood oo muhiim ah oo loo baahan yahay in la raadsado markii la dooranayo steroids Anabolic. Waxaad ku bilaabi kartaa adoo isbarbardhigaya ujeedooyin kala duwan si aad u dooratid kan ugu fiican naftaada.
Dadku waxay doortaan noocyo kala duwan ujeedooyin kala duwan:
isweydaarsiga isugeynta steroids murqaha
waxqabadka steroids xoog iyo adkeysi
jarista steroids dufanka gubanaya
Sababaha kale ee loo adeegsado waxaa ka mid ah bogsashada iyo soo kabashada iyo xoojinta dheef-shiid kiimikaadka.
Ujeeddooyin caafimaad iyo sharci darro labadaba, AAS waa la qaadi karaa:
sida looxyo la galiyay maqaarka hoostiisa
Maqaarka oo loo mariyo kareem ama jel
Foomamka afka ayaa afka laga qaataa. Waxay ka mid yihiin:
Mesterolone (budada Proviron)
Methandienone (budada Dianabol)
Oxandrolone (budada Anavar)
Oxymetholone (budada Anadrol)
Stanozolol (budada Winstrol)
Foomamka la isku duro waxaa ka mid ah:
Budada testosterone enanthate
Trenbolone Acetate budada
Boldenone alaabta ceeriin ah ee loo yaqaan 'Equipoise'
Budada Methenolone budada (Primobolan)
Budada Dibucda ee Nandrolone (Deca Durabolin)
Isbarbar dhig Isugeynta Anabolic Steroids ee 2019
magaca Product Budada Testosteorne Enanthate Budada Dianabol Trenbolone Acetate budada Budada Anavar (Oxandrolone) Qalabka Stanozolol Koritaanka Hormoonka Aadanaha Nandrolone Duufaan cad Boldenone Undecylenate cayriin Budada Drostanolone Propionate Methenolone Enanthate budada
Jarida ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
Waxyaabaha kale ee saameynaya ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆ ◆
Barnaamijyadeena 'Anabolic Steroids Reviews' ee 10 ee ugu caansan
Steroids ugu caansan
1: Budada Testosterone
Testosterone waa steroid-ka anabolic-ka weyn ee si dhab ah u soo saaray jirkaaga si dabiici ah. Hadda iyadoo steroidkani sida iska cad wax ka tarayo sameynta muruqyada masar iyo xoog aad lahaan laheyd, wuxuu kaloo mas'uul ka yahay astaamaha kale ee ragga sida codkaaga qoto dheer iyo wajigaaga wajiga. Markii loo isticmaalo daawo-kobcinta waxqabadka, Testosterone wuxuu caawin doonaa kororka cabirka iyo xoogga murqahaaga, wuxuu yareyn doonaa dhaawaca muruqyada, wuxuuna kordhin doonaa soo kabashada murqaha.
Testosterone oo leh ester gaabis ah oo shaqeynaya muddo dheer
Dad caan ah
Foomamka ugu caamsan ayaa looga isticmaalay adduunka oo dhan iyadoo la adeegsanayo kor u qaadista cayaaraha
2: Budada Trenbolone
Trenbolone waxaa si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah steroids-ka anabolic-ada ugu xooggan ee abid la abuuray. Xaqiiqdii, waxay shan jeer ka xoog badan tahay testosterone sababtoo ah saamiga androgenic ee 500 illaa 500 marka loo eego tan 100 illaa 100. Jir-dhiska, gaar ahaan, tani waa steroid caan ah sababtoo ah sida ugu dhakhsaha badan ayay u xirxiran karaan muruqyada iyo guulaha xoogga. Waxay kaloo faa'iido u tahay kuwa doonaya inay gubtaan dufan si ka dhakhso badan sida dabiiciga ah.
Ester-silsilad aad u gaaban oo Trenbolone ah
Cirbadaha maalinlaha ah badanaa ayaa lagu taliyaa
Kuwa ugu waxtarka badan kuwa doonaya dhakhso
3: Anavar (Oxandrolone) budada
Anavar waxay matalaysaa mid ka mid ah steroids anabolic steroids ee caanka ah waqtiga oo dhan, tanina waxaa ugu wacan dabeecad wanaagsan oo loo dulqaadan karo. Tani waa mid ka mid ah dhowr steroids anabolic-ka ah oo si nabadgalyo leh ay isticmaali karaan ragga iyo dumarkaba, waana sidoo kale mid ka mid ah saameynta ugu wanaagsan ee saaxiibtinimo. Si kastaba ha noqotee, goobahaa qaar Anavar si weyn looma qiimeeyo sababtoo ah dabeecadeeda khafiifka ah, laakiin tan guud ahaan waxaa ugu wacan rajooyinka aan macquul ahayn.
The steroids anabolic steroids ee ugu caansan waqtiga oo dhan
Badanaa dabeecadeeda si wanaagsan loo dulqaadan karo
Dhowr steroids anabolic ah oo si badbaado leh ay ugu isticmaali karaan ragga iyo haweenka
Aad ayaan loo qadarin sababta oo ah dabeecadda sahlan
4: Budada Nandrolone Decanoate
Nandrolone Decanoate waa mid ka mid ah steroids anabolic-ka inta badan la isticmaalo ee ka dhexeeya waxqabadka kor u qaadista cayaaraha. Waxaa caan ah inay si weyn waxtar ugu leedahay steroid mass-xilli-ka-baxsan, laakiin sidoo kale waa mid lagu jecel yahay goobo badan oo ciyaaraha fudud ah faa'iidooyinkeeda daweynta ah. Sababtoo ah faa'iidooyinkeeda daaweyn ee weyn, hoormoonka Nandrolone waa mid ka mid ah steroids anabolic-ka ugu waxtar badan dhaqanka caafimaadka.
The steroids anabolic-ka ugu caansan ee loo adeegsado xoojinta cayaaraha
Waxaa caan ku ah inuu si fiican waxtar ugu yeesho isugeynta daawada steroid ee xilliga-ka baxsan
Mid ka mid ah steroids anabolic ee ugu waxtarka badan dhaqanka caafimaadka
5: Boldenone Undecylenate cayriin
Boldenone Undecylenate waa testosterone laga soo saaray steroid anabolic androgenic waana qaab qaab dhismeedka loo beddelay ee testosterone. Waa isbeddel aad u yar oo ku daraya isku-darka labajibbaarada kaarboon hal iyo laba boos. Undesterlenate ester wuxuu u oggolaanayaa sii deynta ugu sarreysa ee Boldenone qiyaastii 3-4 maalmood ka dib mudista, iyadoo si tartiib tartiib ah loo sii daayo hoormoonka si loogu raaco qiyaastii maalmaha 21.
Qaybta ugufiican ee steroidkani waa awooddeeda ay ku bixiso awooda jirka
Awoowe dhamaan steroids anabolic-ka
Mid ka mid ah steroids-yada aad loogu kalsoon yahay ee ay leeyihiin ciyaartooyda xirfadlayaasha ah iyo jir dhiska
6: Budada Dianabol
Dianabol wuxuu matalaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo mid ka mid ah steroids anabolic steroids ee ugu muhiimsan waqti kasta. Su'aal la'aan, kani waa steroid caan ah oo caan ah oo waligiis suuqa lagu dhufto iyo mid ka mid ah steroidsyada ugu caansan nooc kasta. In kasta oo had iyo jeer loo arkaa kiniin afka ah, Dianabol waxaa loo heli karaa xalka mudista ah, laakiin kiniinadu waxay matalaan dariiqa koowaad ee maamulka.
Steroids anabolic steroids ee ugu muhiimsan waqti kasta
Dawooyinka steroid ee ugu caansan ee waligood ku dhaca suuqa
Inta badan steroids-ka lagula taliyay ee Arnold
7: budada Stanozolol
In kasta oo mid ka mid ah steroids anabolic-ka aadka loo yaqaan, Stanozolol uu aad caan ugu yahay inta badan steroidka iyadoo la adeegsanayo tirada dadka. Waxay ku jirtaa siyaabo badan steroid anabolic dhexdhexaad ah oo si nabdoon ay u isticmaali karaan ragga iyo haweenka. Sidoo kale waa muhiim, waxay xaqiijisay inay si wax ku ool u tahay dadaallada kor u qaadista waxqabadka badan.
The steroids anabolic-ka aadka loo yaqaan
Kuwa ugu caansan inta badan steroidka iyadoo la adeegsanayo tirada dadka
Daawada 'anabolic steroid' oo si nabad ah u isticmaali kara ragga iyo dumarka
Aad waxtar ugu leh dadaallada kor u qaadista waxqabadka badan
8: Hormoonka Korriinka Aadanaha ee cayriin
Hormoonka Koritaanka Aadanaha waa hormoon borotiin ah oo laga soo saaray qanjirka 'pituitary gland'. Waxaa soo saaray dhammaan aadanaha nool, waana heerkiisa ugu sarreeya inta lagu jiro carruurnimada. HGH wuxuu matalaa mid ka mid ah hormoonnada ugu muhiimsan ee jirka bini aadamka maaddaama ay saameyneyso lafaheena, muruqyada lafaha iyo xubnaha gudaha, iyo sidoo kale doorarka meelo badan oo jirka ah.
Hormoonka borotiinka ee ay soosaaraan qanjirka 'pituitary gland' ee murqaha galmada
Kuwa ugu caansan steroid iyadoo la adeegsanayo tirada dadka
Hormoonnada ugu muhiimsan jirka aadanaha
9: budada Drostanolone Propionate
Inta badan dhammaan Masteron suuqa ayaa noqon doona Drostanolone Propionate. Drostanolone Propionate waa dihydrotestosterone (DHT) oo laga helo steroid anabolic. Gaar ahaan, Masteron waa hormoonka DHT ee qaab ahaan loo beddelay iyadoo lagu daray koox methyl ah oo ku jirta kaarboonka 2, tan waxay ka ilaalinaysaa hormoonka inuu ka baxo dheef-shiid kiimikaadka iyadoo loo yaqaan '3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme,' oo laga helo muruqyada lafaha. Waxay sidoo kale si weyn u kordhineysaa dabiiciga anabolic hormoonka.
The ugu ester ee Drostanolone loo isticmaalo ciyaartooyda xirfadlayaasha ah iyo jir dhiska
The androgenic ugu dhibta badan
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan dadkaas la tartamaya ama eegaya
loogu talagalay jir qurxin badan
10: budada Methenolone Enanthate
Methenolone Enanthate waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah steroids anabolic-ka ugu ammaansan ee suuqa waxayna sidataa qiimeyn nabadgelyo oo aad u fiican si loo soo celiyo sheegashadan. Xaqiiqdii, steroidkan waxaa loo isticmaalay si guul leh si loogu daaweeyo carruurta miisaankoodu culus yahay iyo dhallaanka aan dhalan ee aan dhaawaca lahayn. Waxaa sidoo kale loo qoondeeyay osteoporosis iyo sarcopenia ..
Waxa ugu caansan ee loo adeegsado inta lagu gudajiro meertada wareega, marka macaashka badan la helo
A steroid-muddo-shaqeynaya xad dhaaf ah
Daawada anabolic steroid ee afka laga qaato waa wax yar oo gaar ah marka la barbar dhigo steroids anabolic badan ee afka laga qaato
Steroids Anabolic steroids Source oo la isku halleyn karo ka hor intaadan iibsan
Baadh noocyada kala duwan ee Steroids
Waxaad si sahlan uga iibsan kartaa budada steroids budada isla markaana si qarsoodi ah gurigaaga loogu soo gaarsiin karaa. Si kastaba ha noqotee, waa inaad sameysaa xoogaa cilmi baaris ah ka hor intaadan dalban budada steroids. Marka hore, soo ogow inaad helaysid budada steroids saxda ah. Haddii aad saaxiibo ku leedahay goobta jimicsiga ee u adeegsada budada isteeroydhiska, soo hel kuwa ay isticmaalayaan weydiina kuwa ugu wanaagsan bilowgayaasha. Waxa kale oo aad talo weydiin kartaa kuwa dhisaya jidhka kale ee ku jira baraha internetka.
Akhrinta dib-u-eegista budada steroids kala duwan ee laga yaabo inaad xiiseyneyso ayaa sidoo kale faa'iido leh. Gaar ahaan, waa inaad ogaato sida steroids budada ah u shaqeyso, noocee cunnooyinka iyo barnaamijyada jimicsiga si wanaagsan ayey ula socdaan iyaga iyo dhibaatooyinka soo raaca. Haddii aad leedahay xaalad hore u jirtay, soo ogow suurtagalnimada hoos udhaca suurtagalka ah ee isticmaalka budada steroids gaar ah ee laga yaabo inaad noqon karto ka dib.
Xullo Bixiyeyaal Lagu Kalsoonaan Karo steroids
Gudaha Shiinaha, waxaa jira shirkado badan oo sameeya soosaar budo steroids iib ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku iibsanayso budada steroids budada internetka, marna ma hubin kartid halka ay ka timid supplements-ka. Waxaa jira suuq weyn oo dhulka hoostiisa ah oo loogu talagalay budada isteeroydhiska ee adduunka oo dhan iyo sheybaarro dhulka hoostiisa ku jira oo badan, gaar ahaan Yurub, ayaa kuu dhoofin kara budada anabolic steroids sharci-darrada ah. Caafimaadka awgood, waxaa ugu wanaagsan inaad ka dalbato budada steroids la ansixiyay shirkadaha caanka ah.
Iskaashi Nala Wadaag, Waxaan Sameyn karnaa Ugu Yaraan
Badeecaddeenna waxaa lagu soo saaray iyada oo la adeegsanayo 'CGMP' oo tayada ayaa laga daba socon karaa.
Daahirsanaanta waxaa loo dammaanad qaadayaa wax aan ka yarayn 98%. COA; HPLC; Warbixinnada baaritaanka HNMR waa la bixin karaa.
Awooddayada sahaydu waa mid aad u deggan oo jadwalka wax soo saarka tiro badan si joogto ah.
Waxaan khibrad fiican u leenahay inaan ugu adeegno suuqyo dhammeystiran dhammaan adduunka.
Si toos ah ula shaqee wershadeena, waad yareyn kartaa qiimahaaga.
Daawooyinka Anabolic Steroids Raw iibsashada FAQs
S: Sidee loo amro shirkadaada?
1. Waxaad noogu soo diri kartaa dalabkaaga iibsiga websaydhka ama emaylkeena ([Email ilaaliyo]), oraahda ayaa la bixin doonaa mar alla markii aan helno.
2. Lacag celinta iyo soo-dhoweynta sooceliyaha & cinwaanka ayaa la siiyay.
3. Alaabada waxaa loosoo bandhigi doonaa lambarka raadraaca, sawirka xirmada, lambarka raadraaca iyo taariikhda la qiyaasay imaatinka.
4.Gudbiyadu waxay heleen oo dhiibaan faallooyin.
S: Qaabab lacageed ayay shirkaddaadu aqbali kartaa?
A: Wareejinta Bangiga; Western Union; MoneyGram; Bitcoin
S: Muunad La Heli Karo?
A: Haa, Badeecada inteeda badan waxaa loo soo diri karaa sidii shaybaar bilaash ah, laakiin marka aad bixiso kharashka rarka.
S: Sidee loo hubiyaa tayada badeecada intaadan dalban amarrada?
A: COA, HPLC, HNMR waa la heli karaa. Iyo waraaqaha Imtixaannada ee shaybaadhka saddexaad ayaa la siin doonaa waqti waqti.
S: Sidee loo dammaanad qaadayaa lacagtayda oo amaan ah?
A: Lacagta waa la soo celin karaa ka hor intaan alaabooyinka la dirin.
S: Ka waran waqtiga keenista?
A: gudahood gudahood 1 ~ 3 maalmo shaqo kadib bixitaanka la xaqiijiyay. (Fasaxyada Shiinaha laguma darin).
S: Ma jiraan wax dhimis ah?
A: Haa, xagga tirada, waxaan had iyo jeer ku taageernaa qiimayaal ka wanaagsan.
S: Ma xaqiijin kartaa helitaanka sahayda?
A: Awooddayada sahaydu waa mid aad u deggan oo jadwalka wax soo saarka tiro badan ayaa si joogto ah loo sameeyaa.